नेतृत्वमा सक्षम उमेदवार - Pradesh Today
Homeविचारनेतृत्वमा सक्षम उमेदवार
नेतृत्वमा सक्षम उमेदवार
नेपाली कांग्रेस दाङ
नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उमेदवार छनौट गरिसकेको छैन् । पार्टीभित्र हामीहरु आन्तरिक तयारी थालेका छौँ । अहिले नै घोषणा गर्न नमिले पनि हामीले नागरिकलाई सक्षम नेतृत्व दिनेछौँ ।
पार्टीमा प्रायजसो गरी सबैजना दक्ष र सक्षम व्यक्तित्वहरु नै अहिले आकांक्षी देखिनुभएको छ । खासगरी पार्टी नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ हामीले त्यहि कुरा मान्छौँ । नीति र विधि अनुसार नै अबको उपनिर्वाचनमा उमेदवार छनौट हुन्छ । पक्कै पनि जनताले दिएको अमूल्य मत खेर नजाने नेतृत्व नै नेपाली कांग्रेसको उमेदवार हुनेछ ।
चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै पार्टीभित्र विचार वहस चल्ने गरेको छ । हामीले चुनावी गतिविधि सक्रिय बनाउँदै उमेदवार छनौटको कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ ।
पार्टीभित्र सक्षम नेतृत्व आकांक्षी धेरैजनाको भएपनि जेष्ठता, सिनियरको आधार पार्टीले एउटा निर्णय गर्ला भन्ने लाग्छ । जनताको मन जितेको नेतृत्व नै हुनुहुुन्छ । हामीले नेतृत्व हाम्रोभन्दा पनि राम्रो कसरी छनौट गर्न सकिन्छ ?
भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । कोहि कसैपनि भ्रममा नपर्न आग्रह गछौँ । हाम्रो पार्टीभित्र उमेदवार निष्पक्ष रुपमा नेतृत्व छनौट हुनेछ । पार्टी नेतृत्वले गरेका निर्णयहरु मान्दै आएका छौँ । नेतृत्वले गरेका निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ ।
नेतृत्वले यो कुरामा आफै बुझेको छ । चुनावी मत परिणाम हाम्रो पक्षमा पार्नुमात्र उद्देश्य नभएर जनताका समस्यालाई कसरी सुक्ष्म रुपले समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी चनाखो बन्नुपर्छ । चुनावमा गरेका प्रतिवद्धतासँगै नयाँ रचनात्मक काम कसरी गर्न सकिन्छ ?
भन्ने नेतृत्व छनौट नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु म यहाँलाई । अहिलेसम्म पार्टीले निष्पक्ष ढंगले नै टिकट दिने गरेको छ र उहाँहरुले जनताका समस्या समाधान गरेका विभिन्न थुप्रै उदाहरणहरु पनि छन् ।
अर्को कुरा तपाईलाई भनिहालौँ । पार्टीमा विगतमा जे देखियो । अब आगामी दिनमा ति कुरा हुनेछैन् । उमेदवार आफूलाई छनौट नगरेपछि पार्टीको निर्णय विपरीत केही साथीहरु जानुभयो ।
जसले गर्दा पनि पार्टीले विभिन्न ठाउँमा पराजय भोग्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । अब अहिले मंसिर १४ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा यस्तो कदापि हुनेछैन् । पार्टीभित्र गुुट, उपगुटको अन्त्य भइसकेको छ ।
यदि कोहि पनि जिम्मेवार नेतृत्वले त्यसो गर्नुभयो भनेपनि पार्टीले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नेछ । अहिलेको उपनिर्वाचनमा पार्टी एक ढिक्का भएर छनौट हुने उमेदवारलाई जिताउन सिङ्गो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता लाग्ने छौँ ।
पार्टीभित्र देखिएका तिक्तता पार्टीभित्रै छलफल र बहसको माध्यमबाट समाधान गरिनेछ । हुनसक्छ काम गर्ने क्रममा पार्टीभित्र पनि केही असन्तुष्टि देखिन सक्छ तर हामीले त्यसलाई छलफल र सल्लाह बमोजिम अघि बढ्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । पार्टीले छनौट गरेका उमेदवारलाई नेता तथा कार्यकर्ता एक भएर मत आफ्नो पक्षमा पार्ने अभियानमा सबै लाग्नेछौैँ ।